Ityhubhu yeglasi yeVenkile yeApple kwiFifth Avenue ihambile | Ndisuka mac
Ityhubhu yeglasi yeVenkile yeApple kwiFifth Avenue ihambile
Kubonakala ngathi imisebenzi kwiVenkile yeApple kwiFifth Avenue eNew York iyaqhubeka kwaye sele beyiqhaqhe ikomityi yeglasi yentsomi ekungeneni. Imisebenzi ebiqhubeka ukusukela ngoJanuwari ophelileyo ukushiya ivenkile engumfuziselo ilungiswe ngokupheleleyo ngaphakathi, ifuna ukukhutshwa kwekhubhu yeglasi ekungeneni kwaye abanye abasebenzisi bathabathe imifanekiso ephezulu yesakhiwo esecaleni kwevenkile ukuveza imeko yangoku yangaphandle.
Kuyo yonke imbali yayo ityhubhu eyilelwe ngu-CEO we-Apple uSteve Jobs ngokwakhe, kwaye ibekwe ngaphezulu kwivenkile kwikona esemazantsi mpuma eCentral Park kwaye ihlala kwisithuba esiphakathi kwendlela yesihlanu, izitrato, i-58 kunye ne-59, ibiyindawo yohambo lwabasebenzisi abaninzi be-Apple kunye neendwendwe esixekweni abafuna ukuhamba ngevenkile. Ngoku ivenkile ikwinkqubo yokuhlaziywa kwaye into esinokuyibona kulo mfanekiso yindlela abayikhuphe ngayo ityhubhu yeglasi yasentsomini esiyifumene kufikelelo kwivenkile.
Ukutshintsha nje eli candelo levenkile kufikelela kwi-2 yezigidi zeedola kwaye ngaphakathi kutshintsho kulindeleke ukuba lwenze ivenkile ibe yeyangoku, kwisitayile esitsha kunye nokuzikhethela kokuzama izixhobo, ukutshaja izixhobo zethu nokunye. Kwelinye icala, ubungakanani bevenkile kubasebenzisi buya kwandiswa kwaye kunendawo enkulu yezixhobo, ngokubanzi utshintsho olunomdla olunokuthatha ixesha ukuba ligqitywe. Kule ngxaki akukho mhla ucwangcisiweyo kwaye okwangoku abasebenzisi bale venkile banevenkile evulekileyo kwiimitha ezimbalwa kude ukuba babe nakho ukuthenga okanye ukwenza naluphi na uhlobo lolawulo kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ityhubhu yeglasi yeVenkile yeApple kwiFifth Avenue ihambile
Yenza amaxwebhu amnandi abantwana abaneeFonti zoMntwana
I-8x33 Podcast: Ixesha elizayo zizithethi eziSmart